Home WARARKA Ilhan Cumar oo qaaday tallaabo ka dhan ah Maxamed Bin Salmaan
“Haddii Maraykanka uu si dhab ah u taageero xorriyada hadalka, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha, ma jirto sabab aan cunaqabateyn loo saarin Maxamed bin Salman oo ay sirdoonkeenu sheegeen inuu oggolaaday dilka weriye Jamal Khashoggi,” ayay sheegtay Ilhan.
Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa beenisay warbixinta sirdoonka Maraykanka.
Xoghayaha warfaafinta ee Aqalka Cad, Jen Psaki, ayaa Isniintii difaacday go’aanka ah in aan cunaqabateyn lagu soo rogin Maxamed bin Salmaan, iyadoo sheegtay:
“Marka aad taariikhda eegto, Madaxweynayaasha Maraykanka, dimuqraadi iyo jamhuuri-ba cunaqabateyn ma saaraan hogaamiyayaasha dalalka aan la leenahay xiriirka diblomaasi”.
Dhaxal-suge Maxamed bin Salman ayaa ah wiilka taajka boqortooyada kala wareegi doona aabihii Boqor Salman oo 85 jir ah, waxaana inta badan uu qabtaa hawlaha xukuumadda.
Khashoggi, oo maqaalo u qori jiray The Washington Post, ayaa muddo ku noolaa gobolka Virginia ee Maraykanka, waxaana uu si weyn u dhaliili jiray boqortooyada Sacuudiga.
Sanadkii 2018 ayaa lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay Istanbul, halkaas oo lagu jarjaray xubnaha jirkiisa.
Ilhan Cumar ayaa ah gudoomiye kuxigeenka guddi congress-ka u qaabilsan xuquuqda aadanaha, waxaana ay xubin firfircoon ka tahay xisbiga talada haya ee Dimuqraadiga.
Previous articleXogta Masar iyo Sudan oo isu bahaystay Itoobiya
Next articleMasar iyo Sudan oo kala saxeexday Heshiis